Ukubeletha kuzuza kokubili omama nabantwana. Odokotela bakholelwa ukuthi ukubeletha isikhathi eside kunomthelela ekuthuthukiseni kwengane. Kodwa kunezimo lapho kufanele uqedele ukukhishwa kwe-lactation. Njengomthetho, ukuqedwa okubukhali kokuncelisa ukubeletha kungukucindezeleka komama nengane, kodwa kunezinhlobo eziningi zezimo ekuphileni. Akunakwenzeka ngaso sonke isikhathi ukwenza lokhu ngendlela yemvelo, kanti abanye omama basizwa kuphela iphilisi ukuze bayeke ukukhwabanisa. Mayelana nokuthi izidakamizwa zithathwa ukuthini masinyane ukuncelisa ukondla, kulesi sihloko.
Ithebhulethi yokuphela kwe-lactation: isimiso sesenzo
Zonke izidakamizwa ezisetshenziselwa ukunqanda ukuncelisa ingane, zenza isimiso se-hormonal yowesifazane, okwenza umzimba uvimbele ukukhiqizwa kweprolactin (ihomoni elibhekene nokubunjwa ubisi). Thatha ngokucophelela okukhulu, ngoba uhlelo lwe-hormonal lukhulu kakhulu, alunakulinganiswa kakhulu, futhi kwabanye besifazane bangase bavele baphambene. Amathebulethi anjalo aqukethe i-hormone yesine estrogen, futhi, futhi, iyakwazi ukucindezela isimo jikelele, futhi idale isicanucanu, isizungu, ubuthakathaka. Abantu abaningi bathi iziphi izibhebhe abangenakuzithatha ukuze bayeke ukuvinjelwa, njalo bazizwa nemiphumela emibi. Futhi, ngeshwa, okuningi. Phela, kunzima ukumisa inqubo eqale ngemvelo nomzimba, ngakho-ke kuzodingeka uzizwe ukuphutha kwalolu lungiselelo.
Ngamaphi amacala ongayithatha le mithi?
Isinqumo sokuyeka ukuncelisa ingane kufanele kungabi nhlobo noma sithembele kuma-vagaries omama. Lokhu ukucindezeleka okukhulu kakhulu emzimbeni, okumele kuguqulwe ngokuphawulekayo indlela eshukumisiwe. Njengomthetho, abesifazane basebenzisa indlela ephuthumayo, bebhekene nezinkinga ezinkulu.
Ukuqeda ukondla ngemithi kungadingeka:
Izinkinga ngokuqondile ne-mammary gland nesifuba. I-lactostasis engaphazanyiswa kanye ne-mastitis ene-pus ne-fever, ukuvuvukala okuhlukahlukene kwesifuba kungaholela emiphumeleni enhle ngisho nokufaka ukungenelela. Kulesi simo, udokotela angakutshela ukuthi uphazamise ukondla ukuze ubuyisele impilo kamama.
Ngokushesha ngemva kokubeletha, izidakamizwa ezinjalo zibekelwe omama abagulayo abane-HIV, isifo sofuba kanye nezinye izifo ezingathí sina ezingasakazwa kusukela kumama kuya kumntwana ngobisi.
Endabeni yomdlavuza, umama odinga imisebe noma i-chemotherapy enqunywe ithebhulethi ukumisa lactation. Amazwana avela kwabesifazane abawatholile kule nkathi ayakha. Kodwa ngaphandle kokubonisana nodokotela ozayo, akufanele kube khona imizamo yokuzimela yokuthatha le mithi!
Uma owesifazane ebeletha ngokuphela kokuzalwa kwezingane, amaphilisi anqunyelwe ukuba ayeke ukulahlwa ukuze akhiphe ukhiqizwa ubisi olungadingekile.
Leli phepha lingenye yezindlela ezivame kakhulu zokuyeka ukudla. Isimiso somphumela wayo ukuvimbela ukukhishwa kwe-lactation ngokuncipha kweprolactin.
Ngokushesha nje lapho i-prolactin iphela ukuphuma, ubisi buyalala.
Lesi sidakamizwa sibonakala njengethebhulethi ephathekayo ejwayelekile. Zinikezwa ngezicucu ezimbili noma eziyisishiyagalombili ku-vial.
Umkhiqizi uthembisa ukuthi izinga leprolactin egazini (futhi, ngokucacile, e-plasma) lizokwehla ngemva kwamahora angu-2-3, futhi lo mphumela uzohlala isikhathi esingaphezu kwamasonto amabili. Futhi kulokhu ubisi, njengoba bekusho, luyoba nesikhathi 'sokushisa' futhi ngeke lusaphuma.
Thatha isikhathi eside ngeke kudingeke: ngenxa yomphumela odingekayo, kwanele ukuthatha isigamu sethebhulethi izikhathi ezimbili ngosuku ngezinsuku ezimbili.
Abathengi abaningi bakhetha i- "Dostinex", ngoba kunenani lemiphumela emibi, ngokungafani nezinye izidakamizwa eziningi ezifanayo. Yiqiniso, izindleko zala maphilisi ziphakeme kakhulu: cishe ama-ruble ayizinkulungwane ezimbili.
Imiphumela emibi ye- "Dostinex"
"I-Dostinex" iyinamandla, kepha isisetshenziswa esilula kakhulu sokuyeka ukuncelisa. Noma kunjalo, njenge-agent ye-hormonal, inezinhlobo eziningi zemiphumela emibi.
1. Ngesikhathi sokuthola isikhathi eside "I-Dostinex" kungase kube nezinkinga zokucindezela, ngakho zama ukungayithathi ngqo ngaphambi kokushayela. Kungase kuphazamiseke yizinhloko ezihambisana nesicashu.
2. Engxenyeni yesimiso sezinzwa, kukhona ukuphazamiseka kokulala, ukukhathazeka, nokunye kungase kukhule nokukhula komsebenzi wobulili.
3. Ipheshana lezinsizi lingaphendula nokuphathwa kwalesi sidakamizwa. Ukuqokwa, ukwanda kwamapulangwe, ubuhlungu besisu - konke lokhu kungazibonakalisa ngokwesizinda se-"Dostinex".
Amathebulethi okuvimba ukukhishwa kwe-lactation "Bromocriptine" nawo athathwa ukuze aqede ukukhiqizwa kweprolactin. Ngendlela, inqwaba yezenzo ze- "Bromocriptine" iphakeme kakhulu kunezinye izidakamizwa ze-lactation. Isibonelo, kuthathwa nge-amenorrhea, ukungena kwemisitho. Ngisho namadoda, lawa maphilisi azozuza uma etholakala eneplactinoma.
Ukumisa ukukhwabanisa, thatha kabili ngosuku kwethebhulethi eyodwa ngosuku lokuqala, futhi emva kokulinganisa udinga ukuliphinda kabili futhi uphuze inkambo emavikini amabili. Uma ubisi lungasalahleki, bese uqhubeka isikhathi seviki. Yilokho, inkambo yokuthatha lezi amaphilisi yinde kakhulu. Ngaphezu kwalokho, amaphilisi okuvimbela lactation "Bromocretin", njengoba, empeleni, yonke imithi efanayo, banalo uhlu olubanzi kakhulu contraindications.
Imiphumela emibi ye- "Bromocriptine"
Njenganoma iyiphi i-hormone, i- "Bromocriptine" ingahlinzeka ngokuthi "pobochki."
Abaningi bakhononda isicanucanu ngisho nokuhlanza ezinsukwini zokuqala zokungena.
Okunye ukugubha usuku lonke, kuyilapho abanye bekhuluma ngokulala. Okusho ukuthi imiphumela emibi ingabonakaliswa kubantu abahlukile ngendlela yabo.
Baphinde babone ubuthakathaka, ukwehlisa ukucindezeleka kwegazi, ikhanda.
Ngesinye isikhathi kufanele uthathe "i-Bromocriptine" kanye neziphuzo ezidakayo. Kulesi simo, imiphumela emibi ikhulunywa kakhulu, kanti ukusebenza kwezidakamizwa kuncishiswe kakhulu.
Ithebhulethi yokuvimba i-lactation iphikisana nalabo abanezinkinga ezinkulu nezinso nesibindi, izifo ezingapheliyo. Ngakho-ke, yenze isinqumo esizimele mayelana nokuthi iyiphi indlela yokwahlukana okufanele ukhethe, akudingekile. Kubalulekile ukubonana nodokotela ozobeka umthamo odingekayo. Kokubili "i-Dostinex" ne "Bromocriptine" inokuphikisana nokusetshenziswa.
Akufanele kuthathwe kubantu abanomlando wezinkinga ngenhliziyo, imithwalo yegazi. Uma unesifiso sokucindezeleka komfutho wegazi (high blood pressure), noma, ngokuphambene, uhlushwa yi-low blood pressure, khona-ke awukwazi ukwamukela noma ngabe yikuphi. Izifo ezingapheli zepheshana zamathumbu zingaphinda zithinte kabi impilo yakho. Yiqiniso, zonke izinkinga ze-hormonal akufanele ziphathwe "Bromocrementine" noma "Dostinex" kuphela. Qiniseka ukuthi uthintane nodokotela ngaphambi kokuba uqale ukuphuza. Ngisho ngabe umngane wakho omkhulu wayiphuza le mithi futhi bamsiza. Lapha ngeseluleko se-townfolk akufanele uthembele.
Ithebhulethi yokuvimba i-lactation iyinto enhle emakethe yemithi futhi, ngokungangabazeki, isizuze kakade abesifazane abaningi. Kodwa kufanele uqaphele ukuthi awukwazi ukuthatha ngaphandle kwemithi kadokotela kunoma yikuphi. Awukwazi ukuhleka usulu ngezidakamizwa ze-hormonal, umonakalo ongabangela ngokungalungile kungakunzima kakhulu ukulungisa. Udokotela osebenza kahle uzokutshela amaphilisi adingekayo ekuvimbeleni i-lactation, imfundo izokusiza ukuba uqonde izinkinga zokuthola.
Uma ulandela wonke amathiphu anikeziwe, i-lactation ingaqedwa ngaphandle kwezinkinga nokucindezeleka.
Yiziphi ophahleni izibani phezulu
Uyini imvume "Ford Fusion" futhi kanjani ukwandisa ke?